အိမ်ဝင်းအတွင်းတွင် မစိုက်အပ်သောအပင်များနှင့် အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်များ - KSM Global
အိမ်ဝင်းအတွင်းတွင် မစိုက်အပ်သောအပင်များနှင့် အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်များ
June 17, 2022 adminLeaveaComment on အိမ်ဝင်းအတွင်းတွင် မစိုက်အပ်သောအပင်များနှင့် အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်များ
အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သော အပင်များ အိမ်ဆောက်ရက် ရွေးနည်း အိမ်ဆောက်လ ရွေးနည်း မသုံးအပ်သော သစ် (၈) မျိုး အိမ် ကျောင်း ဆောက်ရာတွင် မပြုအပ်သော အရာများ၊သစ်ပင် ပန်းမန်ဆိုတာ လူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အရာပါ
သဘာဝရာ သီဥတုကို သင့်တင့်မျှတစေသလို သတ္တဝါတွေကိုလည်း အကျိုးပြုစေပါတယ်။မိမိအိမ် ပတ်ဝန်းကျင် ခြံ ထဲ၊ အိမ် ဝန်းထဲမှာ အပင်တွေ စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ရွှင်လန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့်လို့ ရှေးမြန်မာအယူအရ မိမိ အိမ်၊ ခြံ ထဲမှာ မစိုက်အပ် ၊ မရှိသင့်တဲ့ အပင် တစ်ချို့ရှိပါတယ်။သိပ္ပံခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီအယူအဆတွေ ခေတ်မမီတော့ဘူးလို့ဘဲ ဆိုဆို ၊ရှေးထုံးကိုလည်း မပယ်နဲ့ဆိုတဲ့ စကားပဲ ပြောပြော အိမ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရှေးမြန်မာ အယူတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။
အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သောအပင်များ။အိမ်၏ အရှေ့ဘက် မျက်နှာဘက်တွင် ညောင် ၊ သပြေပင်များ မစိုက်ရ။ စီးပွားပျက်တတ်သည်။အနောက်ဘက်တွင် လက်ပံပင် ၊ ထိန်ပင် ျမား မစိုက်ရ
တောင်ဘက်တွင် သြှီသြှားပင် ၊ ဖီးခြမ်းငွက်ေျပာ ၊ သင်္ဘောပင်ျမား မစိုက်ရ။ မြောက်ဘက်တွင် ထန်းပင်၊ ဆန်းပင်၊ သဖန်းပင် နွင့် သြွီသြှားပင် မစိုက်ရ။အ ဆိုပါ အပင်များ သည် ဖော်ပြပါ အရပ်မျက်နှာများတွင် ရှိနေပါက စီးပွားယုတ်လျော့မည်။
ရောဂါဘယ ထူပြောမည်။အိမ်တွင်း အိမ်ပြင် ဆူပူတတ်သည်။ အလိုအလျောက်ရှိနေပါကလည်း နှုတ်ပစ် ၊ ခုတ်ပစ်သင့်ပါသည်။
အင်္ဂါ – ဆန်ရေစပါး ပေါများ ကြွယ်ဝမည်
အိမ်ဆောက်လ ရွေးနည်း ….
တပေါင်းလ – ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမည်
ကျန်ခြောက် လတွင် ဆောက်ပါက ပျက်စီးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ယနေ့ခေတ်မှာ အိမ်ကို သစ်သား အခြေပြုပြီး မဆောက်တော့သလောက်ပါဘဲ
ဒါပေမယ့် အတွင်းပိုင်း အလှဆင်တာမျိုးတို့ ၊ ပရိဘောဂတွေမှာတော့ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြသေးတာကြောင့် သစ်ဟာ အိမ် တစ် အိမ်ရဲ့ အဓိက ပါဝင် ပစ္စည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်
ရှေးမြန်မာ လူကြီးများကတော့ အိမ်နဲ့ပတ်သတ်ရင် သစ်ကို အလွန်စိစစ်ပါတယ်။ဗဟုသုတ အလို့ငှာ သိသလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မသုံးအပ်သော သစ် (၈) မျိုး ….
၄။ အရင်း အဖျားရှူး၍ အလယ်တွင် ကြီးသောသစ် (သစ်နပုန်း)
၈။ မျက်ရည်ပေါက် ကဲ့သို့ အကွက်ထနေသောသစ် (သစ်စည်ယို)
အိမ် ၊ ကျောင်း ဆောက်ရာတွင် မပြုအပ်သော အရာများ …..
၁။ တိုင်ဟောင်း ကို ပန်းမဆွဲရ ။
၃။ တိုင်တို (ထောက်တို) ကို ကြမ်းပေါ် မပိုစေ ရ ။
၄။ ကြမ်းခင်းတိုင် တွင် ဝါးမတင်ရ ။
၅။ ခေါင်လျှောက် ခွတွင် မပြီးခင် ကြမ်းမဖောက်ရ ။
၆။ တိုင်ထူရာတွင် တိုင်ချင်း မထိရ
၇။ အိမ်ဆောက် မပြီးခင် ဝန်း မခတ်ရ
၉။ အမျိုးမ တူသော သစ်ချင်း မဆက်ရ ။
တိုးတက်လာသော ယနေ့ခေတ် အနေအထားအရ အထက်ပါ အကြောင်းအရာ တို့အား လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရန် မဖြစ် နိုင်တော့ပါဘူး ။ဒါပေမယ့်လို့ ” ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်း မကြွယ်နဲ့” စကားလို မျိုးပါပဲ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်မြဲခဲ့တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို မျှဝေချင်တဲ့ သဘောပါပဲ … ။ဖတ်ရှူ့သူအားလုံး သာယာအေးချမ်းတဲ့ အိမ်ဂေဟာလေးများ ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ …